Iphepha leBhodi eliSongelweyo, iphepha eliGadiweyo lobuGcisa, iphepha lesincamathelisi - IPHEPHA ELIQINISEKILEYO
PE wawutyabeka iphepha indebe
Ibhodi yeBhokisi yokuSonga eyi-C1S ...
OEM grade ukutya top ...
Lwedilesi: Igumbi 1303-2, NO.158 TAIAN Ephakathi INDLELA, SHOUNAN STREET, YINZHOU, Ningbo
1: Intsingiselo PE iphepha wawutyabeka: Coat le eshushu inyibilika PE iplastiki film ngokulinganayo phezu kwephepha ukwenza iphepha wawutyabeka, ekwabizwa ngokuba iphepha PE. 2: Umsebenzi kunye nokusetyenziswa xa kuthelekiswa nephepha eliqhelekileyo, linamanzi kunye neoyile. Isetyenziselwa ukwenza iibhokisi zokutya, iikomityi zephepha, iphepha ...
Isiko Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona i-1: Imeko yezinto zobugcisa zokurisayikilisha 1. ukuqokelela 2.sorting 3.shredding 4.washing 5.melting and pelletizing 2: Challenges 1. Kuphela yinxalenye encinci yeplastiki ezilahliweyo efumanekayo ukuze iphinde isetyenziswe okanye iphinde isetyenziswe. 2. Ixabiso elingenaxabiso nelisebenzayo lokurisayikilisha kweplastiki exubeneyo ...
malunga nesangqa, ungadinga ukwazi ...
Ikhadi lokutya elibhijelwe ngamacala angama-ultra-high-ultra-lightweight ｜Ixabiso lezinto ezisezantsi | Akukho bumenyezeli bokuqaqamba kokukhanya: 1.63-1.74 cm3 / g; Ubunzima be-200 ~ 350g / m2 Isindululo: ● Ukuxinana okukhanyayo, ukukhanya okulula, okungenabungozi kwindalo, okuphantsi ...